HVM: Miroso mankany amin’ny faharavana
Vous êtes ici : Accueil GAZETIN'NY NOSY HVM: Miroso mankany amin’ny faharavana
Tonga amin’ny kihon-dalana mankany amin’ny faharavany ny antoko HVM (Hery vaovao ho an’i Madagasikara) amin’izao fotoana izao. Maro ny resaka mandeha hatramin’ny fisamborana an-dramatoa Claudine Razaimamonjy iny. Ho an’ny mpomba ity antoko HVM ity dia niteraka fialana moramora ho an’ny mpikambana tao iny raharaha iny. Ho an’ny mpomba ny fitondrana dia vehivavy noheverin’izy ireo fa tsy azo kitikitihana iny ramatoa iny. Andrin’ny fitondrana ary tsy maty manota koa satria to-teny tao amin’ingahy Hery Rjaonarimampianina izay filoham-pirenena. Nankalazaina izany ary nampahalalana ny olona maro, ary indrindra nentina nandresy lahatra ny olona mba hilatsaka ao anatin’ity antoko pôlitika ity. Ramatoa Claudine Razaimamonjy koa tena nampahafantatra izany fahefany izany tamin’ny olona rehetra ary nireharehany tanteraka tokoa izany. Na dia mpanolotsaina manokan’ny filoham-pirenena aza no andraikiny tamin’izao fitondrana izao, dia isan’ny olona nahazo ireny antsoina hoe “jiro manga” na fiara mpialoha filoham-pirenena na mpikambana amin’ny governemanta ireny rehefa ao Fianarantsoa ao. Midika izany fa tena nanampatra ny fahefany tanteraka tokoa ity ramatoa ity, ary nampiseho ny maha akaiky azy ny filoham-pirenena tanteraka. Tsy afa-nanao izany anefa izy raha tsy nahazo alalana tamin’ingahy Hery Rajaonarimampianina, na tsy fanaon’ny arifenitra izany zavatra nataony izany. Tena natahorana tokoa izy tao Fianarantsoa tao ka izay zavatra noteneniny dia notanterahan’ny mpitondra tany an-toerana avokoa na kely na lehibe.
Noho izany fahefana nananany izany dia nahavoasarika olona mpikambana HVM marobe ity ramatoa ity tao Fianarantsoa, izy koa tia nizara vola rahateo. Tsy isalasalana ny milaza fa toerana be HVM indrindra ary mpomba fanjakana Hery Rajaonarimampianina i Fianarantsoa. Porofon’izany ny fitsidihan’ingahy Filoham-pirenena ny toerana izay tena ambanivohitra tokoa tany amin’ny faritra Matsiatra Ambony. Raha ny zava-misy any Fianarantsoa no ankehitriny dia misitrika ireo olona mpomba ny HVM ary mangina tanteraka. Ny fanarabian’ny olona koa tsy hay intsony ny milaza azy. Ny tena loza aza hono dia ny fandosiran’ireo ben’ny tanàna rehetra nanaovan-dramatoa Claudine asa. Isan’ny voaresaka be dia be amin’ity raharaha ity koa ny minisitra ny Atitany Solonandrasana Olivier Mahafaly, izay lasa praiminisitra amin’izao fotoana izao. Ity Praiminisitra ity izay voalaza fa isan’ireo nanome baiko ny ben’ny tanàna hanome ny vola ity ramatoa ity na vita na tsy vita ny asa. Hatramin’ny mpanolotsainan’ny kaominina nisy ireny tetikasa ireny no nandositra raha ny loharanom-baovao satria matahotra ny ho voa antso aty amin’ny Bianco (Birao mahaleo tena miady amin’ny kolikoly) hono.
Nivadika ny rasa ankehitriny ka i ramatoa Claudine izay natao ho tsy maty manota sy hitsikitsika nivavahana ity no nampandosirina raha toa ka tokony ho nampidirina am-ponja. Vokatr’izany dia nandosiran’ny olona ny antoko HVM. Hatramin’ny depiote avy no niala tao amin’ny vondrona parlemantera ny ankamaroany ankehitriny. Midika izany fa hanana olana amin’ny mpanohana azy ity antoko ity amin’ny fifidianana izay ho filoham-pirenena amin’ny taona 2018 ho avy izao.
Nangonin’i Jesy Rabelaolao
« Taom-baovao Malagasy » : Pose d’une stèle pour marquer la célébration